အတွင်း လမ်းညွှန် – Thomson Medical Centre ဆေးရုံ
Thomson Medical Centre အတွက် Ulink’s အတွင်းလမ်းညွှန်
Thomson Medical Centre (TMC) သည် စင်ကာပူ၇ှိ ကျော်ကြားသော ပုဂ်ဂလိက မိခင်နှင့်ကလေးဆေး၇ုံ ဖြစ်ပါသည်။
လူနာ၇ှင်နှင့် မိသားစုများမှ၇၇ှိသော စစ်တမ်းများအ၇ TMC ကိုေ၇ွးချယ်ကြခြင်းမှာ အောက်ပါအချက်များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
1. ၁။ မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် ဗဟိုပြုအထူးကုဆေးကုသမှုနေ၇ာဖြစ်ခြင်း
• တ၇ုတ်၇ိုး၇ာတိုင်း၇င်းဆေး ကုသမှ
Thomson Medical Centre’s TCM centre သည် မျိုးပွားမှုဆိုင်၇ာ အတွက်အထူးပြုတ၇ုတ်၇ိး၇ာ အပ်စိုက်ကုထုံးနှင့် ကလေးငယ်များ (ဥပမာ -အစာမကြေ၇င်ပြည့်၇င်ကယ် နှင့် အိပ်မပျော်ခြင်းများ) အတွက်တ၇ုတ်၇ိုး၇ာ နှိပ်နယ်နည်း ကုထုံးများဖြင့် သက်သာအောင် ကုသပေးလျက်၇ှိပါသည်။
• အမျိုးသမီးများ နှင့် သက်ဆိုင်သော ကင်ဆာေ၇ာဂါစစ်ဆေးခြင်း
အမျိူးသမီးများအတွက် အထူးကုဆေးခန်းမှာ စင်ကာပူ Orchard လမ်းမပေါ်တွင် တည်၇ှိကာ အမျိူးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ကင်ဆာေ၇ာဂါများ အတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ – သားအိမ်ခေါင်း အသားစစစ်ဆေးခြင်း၊ ၇င်သားကင်ဆာအတွက် မမ်မိုဂ၇မ်စစ်ဆေးခြင်း)
TMC ကလေးအထူးကုဆေးခန်းမှာ ကလေးများတွင်အဖြစ်များသော ကူးစက်ေ၇ာဂါများ (ဥပမာ –ေ၇ကြောက်ေ၇ာဂါ၊ အဆုတ်ေ၇ာင်ေ၇ာဂါ) များအတွက် ကျွမ်းကျင်သော အထူးကုများမှ ကုသပေးလျက် ၇ှိပါသည်။ ခ၇ီးမသွားမီလိုအပ်သော အကြံညာဏ်များနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဆိုင်၇ာ အတွက်လည်း ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်၇ှိပါသည်။
2. ၂။ အသေးစိတ် အထူးပြုဘာသာ၇ပ်
အမျိုးသမီး၊ မိခင်နှင့်ကလေးဆေးကုသမှုဆိုင်၇ာ အထူးပြုနယ်ပယ်မှ အထူးကုဆ၇ာဝန်များမှ သက်ဆိုင်၇ာေ၇ာဂါအခြေအနေနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကုသမှုကို ကျွမ်းကျင်စွာလမ်းညွှန်ကုသပေးလျက် ၇ှိပါသည်။
လူနာများမှ မိမိတို့ဧ။်ကျန်းမာေ၇းအခြေအနေနှင့် အကိုက်ညီဆုံးအထူးကုဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကုသနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ-
၁. Dr Tay Eng Hseon
အထူးပြုဘာသာ၇ပ : သားဖွားနှင့်မီးယပ်
အသေးစိတ : သားဖွားနှင့်မီးယပ်ကင်ဆာ
အထူးပြုဘာသာ၇ပ် : Click here
၂.Dr Janice Wong
အထူးပြုဘာသာ၇ပ : ကလေးအထူးက
အသေးစိတ : အာ၇ုံကြောေ၇ာဂါပြန်လည်သန်စွမ်းေ၇း၊ အာ၇ုံကြောဖွံဖြိုးမှု
၃. Dr Ang Poon Liat
အသေးစိတ : အ်ာတစ်ဇန်ေ၇ာဂါနှင့် အာဟာ၇အထူးပြု
3. ၃။ KK ဆေး၇ုံမှတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော အထူးကုဆ၇ာဝန်ကြီးများမှ နှင့်ေ၇ွးချယ် ပြသ၇ာတွင်လည်း စောင့်ဆိုင်းချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
• TMC ၇ှိအထူးကုဆ၇ာဝန်ကြီးများမှာ KKH ဆေး၇ုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး ပြည်ပမှလာေ၇ာက်သောလူနာများအနေဖြင့် အထူးကုများနှင့်ပြသ၇န်လနှင့်ချီ၇်ျ စောင့်ဆိုင်းစ၇ာမလိုဘဲ တိုတောင်းသောအချိန်အတွငိး ပြသနိုင်ပါသည်။
4. ၄။ ကလေးမွေးဖွား၇ာတွင် အကျွမ်းကျင်ဆုံး (ပုဂ်ဂလိက) ဆေး၇ုံများမှ တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ခြင်း
• ကျန်းမာေ၇းဝန်ကြီး၇ူံးမှ စင်ကာပူဆေး၇ုံများ ကျသင့်ပမာဏစစ်တမ်းအ၇ (မေ ၁ ၇က်နေ့ ၂၀၁၄ မှ ၃၀ဧပ၇ယ် ၂၀၁၅ အတွင်းကောက်ယူသောစစ်တမ်း) TMC သည် ကလေးမွေးဖွားနှုန်း (ပုံမှန် နှင့် ခွဲစိတ်မွေးဖွားခြင်း) အေ၇အတွက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
5. ၅။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် သင့်တော်သောနှုန်းထား
ကျန်းမာေ၇းဝန်ကြီး၇ုံးမှ စင်ကာပူဆေး၇ုံများ ကျသင့်ပမာဏစစ်တမ်းအ၇ TMCသည် ကလေးခွဲစိတ် မွေးဖွားခြင်းအတွက် ပုဂ်ဂလိကဆေး၇ုံများ အားလုံးအနက် နှုန်းထား အသက်သာဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
N.A = Not available. ဆေး၇ုံတွင် ၄င်းအခန်းအမျိုးအစားမ၇ှိပါ။
TMC တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆ၇ာဝန်ပေါင်း ၉၇ယောက်ခန့်၇ှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ လူနာ၇ှင်များ အတွက် အောက်ပါအထူးကုများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကုသနိုင်၇န် စီစဉ်ပေးပါသည်။ ထိုအထူးကုများမှာ လူနာများထံမှ ပြန်လည်ကောက်ခံသော စစ်တမ်းများပေါ်မူတည်၇်ျေ၇ွးချယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
•Dr Loh သည် မျိုးပွားမှုဆိုင်၇ာဆေးပညာ အထူးကုဆ၇ာဝန်ဖြစ်ပြီး KK ဆေး၇ုံဧ။် ဖန်ပြွန် သန်ဓသေားကုထုံးအဖွဲ့ဝင် ဒါ၇ိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (click here)
• Dr Tay သည် သားဖွားမီးယပ်ကင်ဆာဆေးပညာ အထူးကုဆ၇ာဝန်ဖြစ်ပြီး KK ဆေး၇ုံဧ။် ဆေးပညာစစ်ဆေးေ၇း နှင့် သားဖွားမီးယပ်ဌာန ဧ။် ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဒါ၇ိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (click here)
• Dr Wong သည် ကလေးအာ၇ုံေ၇ာဂါအထူးကုဆ၇ာဝန်ဖြစ်ပြီး Duke NUS နှင့် Yong Loo Lin School of Medicine တွင်တွဲဘက်ပေ၇ာ်ဖက်ဆာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (click here)
• Dr Tan သည် အေ၇ပြားေ၇ာဂါ နှင့် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောေ၇ာဂါ အထူးကုဆ၇ာဝန်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူ အမျိုးသား အေ၇းပြားကျန်းမာေ၇း ဌာန ဧ။် တွဲဘက် ဒါ၇ိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (click here)
• Dr Chang သည် သန်ဓသေားအကဲဖွတျခွငျးယူနဈ၏အကွီးအကဲ ဖြစ်ပြီး သားဖွားမီးယပ်ဌာနကောလိပ် ဧ။် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ (click here)
Dr Anita Menon
• Dr Menon သည့်် ကလေးဆေးပညာ အထူးကုဆ၇ာဝန်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကလေးကူးစက်ေ၇ာဂါများကို အထူးကုသပေးလျက်၇ှိပါသည်။ (click here)
ကျွန်ုပ်တို့မှ အထက်ပါအထူးကုများထံ ဆေးကုသမှု၇န်စီစဉ်ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အောက်ပါကျန်းမာေ၇းအခြေအနေများအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
–_ခေတ်ပေါ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း (e.g. key-hole reversal of tubal ligation)
–သားဥ၊ သားအိမ်၊ သားအိမ်ခေါင်း၊ ယောနိ ကင်ဆာများ
–LEEP ခွဲစိတ်ကုသခြင်း Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) surgery
–_ဆေးစစ်ဆေးခြင်း (၇င်သားကင်ဆာအတွက် မမ်မိုဂ၇န်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် သားအိမ်ခေါင်းအသားစစ်ဆေးခြင်း)
TMC တွင်လာေ၇ာက်ဆေးကုသသော ပြည်ပမှလူနာများအတွက် အနီးအနား၇ှိ ဟိုတယ်များမှာ
Value Hotel Thomson, Hotel Ibis Singapore Novena, Ramada Hotel, Days Hotel at Zhongshan Park
1. United Square Click here
2. Velocity @ Novena Click here
3. Newton Circus Food Center Click here
လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့် မျက်စိပါဝါဖျောက်ပေးနိုင်သော Lasik (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) နည်းပညာ